maalin Happy Valentines waa weeraryahanka on 14 February 2018. Haddii mid ka mid ah uu go'aansado Maalinta Jacaylka 2018 sida maalinta at kaas oo jacayl la xusaa oo la Maalinta Jacaylka kaararka Maalinta Jacaylka hadiyado iyo Maalinta Jacaylka images, Maalinta Jacaylka Wallpapers iyo maalintii ku faraxsan Valentines SMS.
Waa in Maalinta Jacaylka sidaas ma noqon oo waa maalin ay dabaal for kale oo aan ahayn oo kaliya jeclaayeen?
"In xaqiiqda ah, waxaan la kulmi jacaylka in badan oo caadooyinka iyo xaallada, iyo nooca jacaylka in kulan ay noolyihiin qofka, ma aha had iyo jeer ka mid ah labada isqabta jeclahay "in inta badan xusaa Maalinta Jacaylka. Qoraaga A sheegay. "Dhaqanka Our caadiga ah waxaa ka buuxa jacaylka taataabtay. Gaar ahaan pop iyo music film abuuraa la filaayo in jacaylka waa in la dhammeeyo dhismeedka this. Waxaan inta badan soo bandhigay for tusaalayaal kale, iyo waxa ay taasi na indha la 'in noocyada kale ee jacaylka, "Sharxayaa Jens W. Pedersen, in u maleyso inay tahay muhiim ah in maskaxda lagu hayo in jacayl la dhex baadhi karin iyo khibrad siyaabo kale:"Love sida uu noqon karaa mid wax ruuxiga ah, jacayl ah nolosha laf, qoyska ama asxaabta "
Inta badan wax ku bartay oo ku saabsan Valentines ku faraxsan maalinta 2018 tixgelinaysaa in ay ahayd wadaad in ay ahayd in khilaafka la Roman Emperor Claudius II kii mamnuucay ragga dhallinyarada ah loo Guuriyo marka ay ahaayeen si ay u noqdaan askar. Oo wadaadku St. Valentine sii waday in ay guursadaan lamaane oo waxaa ugu dambeyntii toogasho ah, waayo, sharciga gooyo ee ka socday.
Waxyaabaha Si aad u qabtaan on Maalinta Happy Valentines 2018 Iyada oo Your Valentine.
Warqad u qor jacayl kulul
In xiriirka ugu, dhib jiro waqti in midba midka kale si wadajir ah u sheegto oo ku saabsan waxyaalahan oo dhan ayaynu jecel nahay oo ku saabsan mid kasta oo kale oo uu nool yahay. Qaado waqti aad u sheego inaad jacaylkiinna iyo Raaxo, oo ka koobanahay warqad jacayl ah in aad gabar saaxiib ama xaaskaaga on Valentines ku faraxsan maalinta 2018.
Waaya-aragnimada Cultural la Valentines aad
La wadaago Waaya-aragnimada noo xidho wada oo wuxuu noqday madaxa rukunka xiriirka. La yaab ah isaga / iyada oo leh tigidhada inay riwaayad live, tiyaatarka, opera ama filim cajiib ah.
Abaabulaan cuno On The Living Room Floor
U qaybi buste geeduhu dhulka qolka fadhiga, meel badan oo Barkimo jilicsan iyo Barkimo, iyo wada raaxaysan Tapas iyo sidoo kale macaanayd kale. Server iyo dhir udgoon sida suugo basbaas farxo, sinjibiil, toon, vanilj iyo peppermint. Waxay leeyihiin, sida shukulaatada madow, sinjibiil madow, subagga looska iyo yicib, sar in la kordhiyo niyad ah. Dhallaanka la oysters, Midhaha berde oo cusub, mooska, avocados iyo xaaladaha kale taas oo ka dhigi kartaa ururada kula beera ubaxa.
Ubax aad Valentines
"Dheh leh ubaxyo '. Hubi muhiimadda ubaxu ee ka hor doorashada bouquet ah ee aad Valentine 2018.
Kariyo isaga / iyada jecel menu. Samee jawi saaxiib oo raaxo leh heshiis weyn oo shumac, ubax, music iyo marada miiska.
Isaga sii / iyada Foot Duugista
Ma wax gaar ah saaxiib by bixinta iyo helidda massage cagta? Waxaa laga yaabaa sababta oo ah faraha cagta dhif ah waa mawduuc ee dareenka jacaylka, laga yaabaa sababta oo ah dad badan oo naga mid ah waa yara suubban marka ay timaado cagaheenna. Laakiin massage cagta ah, set oo ah kulul, gacmaha jecel, duugo iyo salsalaaxdo cagta, waxaa laga dareemi karaa jidhka oo dhan. Bixiya saliid wanaagsan qaar ka mid ah, iyo sii haddii loo baahdo. Duug ilaa kuraamaha iyo suxullada.
Waa wax fiican u rumowday, xitaa haddii aad u wada noolaa in xiriir dhowr sano ee. Lugta iyo shukaansiga waa hab wanaagsan in dib u ololka iyo mid kasta oo kale. Rumowday waa hab fiican inaad u sheegto qofka aad isqabtaan in aad dareento barbaro isaga u - aan aad had iyo jeer u baahan tahay in ay isticmaalaan hal eray.
Guji hoos links in caasimadii hadiyado la yaab leh, waayo, Valentine, tusaale: Maalinta Happy Valentines Images, Pictures ,Messages, Maalinta ugu faraxsanahay Valentines videos, hadiyadaha iyo qaar badan oo.
Valentine Day Dhadkan app Status 2018
maalinta Valentine Facebook DP
Valentine maalin Ingiriisi SMS 2018
Valentine maalin SMS 2018 Waayo, saaxiibtiis
Valentine maalin SMS for Friends 2018
Valentine maalin SMS waayo, ninkeedii 2018
Quotes Romantic Waayo, Sayga Iyadoo Images 2018
Valentine maalin Picture SMS 2018
Happy Day Valentines GIF kartoon ah 2018
Maalinta Valentines Happy Alyce Lyrics 2018
Happy Valentines Day hamso 2018
Valentines Day Cards Waayo, isaga 2018
Valentines Day Cards Waayo, Her 2018
Valentine Day Cards Waayo, saaxiib 2018
kaararka maalin Valentine for gabar 2018
Valentine Day Card Waayo Hooyo 2018
Valentine Day Card Wiilka 2018
Kaararka Valentines Day for Sister 2018
Valentines Day Cards Waayo, Sister In Law
Valentines Day Cards Waayo, luqudda 2018
Valentines Day Cards Hooyada 2018
Valentines Day Cards Waayo, Xaaska 2018
Valentines Day Cards Waayo, Saaxiibow 2018
Valentine Day Waraaq la Shayari 2018
Maalinta Valentines Happy My Love 2018
Maalinta Valentines Happy waan ku jeclahay
Valentine Week List 2018, 7 Days of Maalinta Happy Valentines taariikhaha:
Haa waxaan qaadan hal talaabo inay maalin Happy Valentine ee 2018! Valentine, maanta waa maalin caan xumme daqiiqad kasta oo gaar ah oo xasuus our cajiib ah. Waa maalintii si ay u dhawraan xasuus kulul jacaylka laba qof aan la aqoonsan, kuwaas oo dib u noqday naf. Maalinta Jacaylka waa sida cudur daar qubays qaar ka mid ah jacayl dheeraad ah iyo in ka badan oo dheeraad ah oo ka taataabtay in qof ka mid ah kuwaad la ma waxaad qiyaasi kartaa noloshaada haddii uu noqon karaa mid aad Hooyada ama aabaha sida aynu ognahay in hooyo iyo aabe mar walba waa noo hoose jeclahay. Maalinta Jacaylka waa maalin kaliya kale ku caashaqay dhab ah maalin walba ku qaataan fasaxooda ku caashaqa oo xitaa ka badan maalin ka hor. Si kastaba ha ahaatee, Maalinta Jacaylka this la xusaa in ay dabooshay jacaylka u dhexeeya laba kuwaas oo ay guuri laga yaabo in maalmaha soo tuulosan noloshooda ama iyaga kuwa cusub jacayl leh kasta oo kale ama kuwa asxaabtiisa naftiisa runta ah, laakiin ma wada heli kartaa in uu nool yahay, maalinta Valentine ee sabab u ah qof kasta oo ku jira jacayl iyo leedahay dhadhan ah sweetest jacayl oo aad rabto si ay ugu dabaal nolosha isticmaalaya mid ka mid ah gaar ahaan.
Haddii aan ka hadlo 14aad ee maalinta Valentine February ee, waxaa jira dhamaystiran gaar ah 7 maalmood ku caashaqi jiray bisha February aka todobaadkii jacaylka sidoo kale loo yaqaan todobaadkii jacayl Jacaylka iyo maalmaha gaarka ah February oo sida caadiga ah bilaabataa Maalinta Rose ku xiga waxay soo jeedinayaan Day dabadeedna Maalinta Chocolate dabadeedna Day Teddy danbe raacay by Maalinta yabooha dabadeedna Day Hab iyo kan ugu dambeeya, laakiin ma yaraan dhunkada Day iyo maalinta ugu danbeysa maamulaha yimaado Maalinta Jacaylka. Si aad kuwa rag iyo dumar, kuwaas oo aadan fahmin, kuwaas oo 7 maalmood oo jadwalka toddobaadka Valentine, iyaga, waayo, waxaan sameeyey sheet taariikhda effortless Maalmaha todobaadka Valentine ee si ku haboon.
Valentine Week List 2018 Maalmaha Maalinta Happy Valentines taariikhaha:
Jacaylka Days Week Taariikhda 2018 7 Days of Valentine Week
7th Feb 2018 (Wednesday) Maalinta Rose (1st Maalinta Valentine)
8th Feb 2018 (Thursday) waxay soo jeedinayaan Day (2nd Maalinta Valentine)
9th Feb 2018 (Friday) Maalinta Chocolate (3rd Maalinta Valentine)
10th Feb 2018 (Saturday) Maalinta Teddy (4th Maalinta Valentine)
11th Feb 2018 (Sunday) Maalinta yabooha (5th Maalinta Valentine)
12th Feb 2018 (Monday) Maalinta hab (6th Maalinta Valentine)
13th Feb 2018 (Tuesday) dhunkada Day (7th Maalinta Valentine)
14th Feb 2018 (Wednesday) Maalinta Jacaylka (V-maalin)
Liiska toddobaadka Jacaylka & sheet taariikhda ay leeyihiin muhiimada gaar ah. Ina keena aynu ka badbadin runta ka dambeeya kuwaas oo dhan Valentine maalmood toddobaadkii liiska iyo sababta aan u dabaal this 7 maalmood ee Valentine.
7 Days of Valentine & Maxaan About Days Tani
Maalinta Rose 2018: sababta ugu badan ee lamaanaha ah in ay tahay ninkaaga ama xaaskaaga, saaxiib ama saaxiibad, waa xaqiiqda ah in uu ka dhigan yahay bilowga todobaadka Valentine ee 7 February. Rose A qurux badan la siiyo si uu u muujiyo dareenka jacaylka midkiinba midka kale. Sida cas loo gudbiyo sida calaamad u ah jacayl, si aynu bilaabi toddobaadka by muujiyaan jacaylka.
waxay soo jeedinayaan Day 2018: Waxaa maalintii labaad ee toddobaadka Jacaylka iyo maantadan la joogo la xusaa 8 February tan iyo tallaabada xigta. On maanta in saaxiibka ama nimankooda soo jeedinaya ay gabar gaar ah ama xaaska ay aad u gaarka ah hal abuur leh & style u gaar ah.
Maalinta Chocolate 2018: ka dibna yimaado maalinta ku xigta ee toddobaadka Jacaylka xusaa 9 February. Ka dib markii ay qaadato jeedinaya, maalintii ku xigtay waxaa la kala duwanaayeen maydhashada jacayl ah oo siinaya shokolaatada qaabka wadnaha la jeclaysto.
Maalinta Teddy 2018: ka dib markii ay maalin shukulaatada, ay afkoda maalin teddy in maalintii afraad ee toddobaadka Jacaylka ku dhacaa, 10 February. Sababta maantadan la joogo la xusaa jirin sida kuwan midkood muujiyaan jacaylka ay la cute teddy a.
Maalinta yabooha 2018: maalin yabooha soo socota 11 February sida ay tahay maalintii shanaad ee V ee. Week oo maanta ku Lamaanayaasha aan dibiiciga jacaylka ay midba midka kale. Guys ballan qaaday in ay ku waari wada noqon nooc ah oo uu ballanqaaday.
Maalinta hab 2018: ka dib rajo, markii danbe yimaado maalinta hab kaas oo maalintii lixaad ee toddobaadka Valentine 12 February. Sida magaca laftiisa qeexayaa, Labada qof ee u baahan in si adag aaddey kasta oo kale oo.
dhunkada Day 2018: halkan waa maalin dhunkasho ku saabsan 13 February in maalinta toddobaad ee toddobaadka Valentine iyo waxa ay u muuqataa in maanta maalintii ugu fiican tan iyo waxaad codsan kartaa in aad dhunkasho ugu horeysay, haddii aad kaliya iyada soo jeedin.
Happy Maalinta Jacaylka 2018: ugu danbeyn maalinta weyn soo gaaray 14 February. Waa maalintii ugu fiican ugu gaar ah oo dhan ee ku caashaqay ka, Labada qof ee isqaba iyo sida Maalinta Jacaylka bixisaa kasta iyo mid kasta si uu u muujiyo qaab dhab ah jacaylka qof gaar ah.
Qubeyska kadib jacaylka toddobaadka oo dhan ka dibna yimaado qayb ka ugu weyn ee dadka oo aan rumaysan in jacaylka ama rag iyo dumar kuwaas oo madadaalo ah ka dhigi Maalinta Jacaylka inta badan shakhsiyaadka iyo hal waa anti bararka jacaylka ama dadka aan hantidaan qofka qaar ka mid ah sida ay Valentine, toddobaadka soo raacay waa caanka ah sida anti todobaadkii Valentine ama maalmo Valentines xitaa kaftan ah horyaalka.
funny / anti Valentine Maalmaha
todobaadkii Anti Maalinta Jacaylka Taariikhda Liiska Week maalin Anti Jacaylka 2018 Days of Anti Valentine
15th Feb 2018 Maalinta dharbaaxay Thursday
16th Feb 2018 Iska Jooji Day Friday
17th Feb 2018 Maalinta cadar Saturday
18th Feb 2018 Maalinta shukaansiga Sunday
19th Feb 2018 Maalinta qirashada Monday
20th Feb 2018 Maalinta oo maqan Tuesday
21st Feb 2018 jebi Up Wednesday
The todobaadkii anti-Valentine ama laba 7 Days Kadib Maalinta Jacaylka maanta dharbaaxa on 15 February, laado maalin on 16thFebruary, maalin cadar on 17 February, maalin shukaansiga on 18 February, maalin qirashada on 19 February, maalin la waayay 20-kii February iyo qeybtii ugu danbeysay 21-kii February.
Maalinta Jacaylka waxaa loo yaqaan iyada oo dunida ka badan 14 February sanad kasta. Maalinta Jacaylka la xusaa by qof kuwaas oo Love. Maanta waa caan ugu horrayn mid ka mid ah dhallinyarada farxad aad u fiican, xamaasad iyo farax. Valentines Week bilaabo ka 7-dii February iyo socon ilaa 14-kii February. Maalin kasta oo ka mid ah Valentines Week la xusaa in hab gaar ah oo matalayay xaflad gaar ah in la kala duwanaayeen in ay curiyaan Week Valentine gaarka ah ee kasta, hubaal. Dhammaan dadka ku jira jacayl sugto maanta inuu soo jiito dadkoodii ay jeclaayeen oo waxaan ka dhigi dareemaan gaar ah.
maalinta Valentine oo dhab ahaan waa maalinta ugu sugayay by caashaqi jiray ee adduunka oo dhan halkan waa in ay yimaadaan. Mid kasta oo ka caashaqi jiray ka ayaa sugi ilaa maantadan la joogo sida maanta oo kale iyaga siisaa fursad rasmi ah u muujiyaan jacaylka ay u burburin. maalinta Valentine ee ah in qiyaas ahaan waa 14-February sanad kasta waxaa ka hormarey iyada oo todobaadkii Valentine ah ee. todobaadkii Jacaylka 2018 bilaabmin ka feb 7-dii. isbuucaan ka 7-dii in 14 waxaa sidoo kale loo yaqaan todobaadkii jacaylka ama todobaadkii jacayl. The sheet todobaadkii Valentine bilaabo ka mid ah 7-dii Feb Wednesday laga bilaabo maalinta kordhay. Hoos waxaa ku ururinta full of maalmood toddobaadkii Valentines 2018.
Valentine Week Days Taariikhaha 2018:
Maalinta Rose 2018:
maalin Rose waa kala duwanaayeen bixinaya kaymaha in midkiinba midka kale. Xitaa kuwa iman jacayl dalab cas u kacay inuu dadkoodii ay jeclaayeen. ma ahan oo keliya maalin ay tani ahayd oo keliya kuwii ku caashaqi jiray. Maanta waxaa u malaynayeen iyadoo saaxiibo aad. Faraqa kaliya ee been waa la coloration ee waxan oo dhan ayaa kor u kacay. Waxaa ku dhacaa, Feb 7-dii iyo qallafsan 2018 waxa dhacaya ku dul waa on Wednesday.
todobaadkii Jacaylka bilaabmaa Maalinta Rose, sida ubax noqon lahaa hubaal wax ugu jecel yahay buuxda oo dhab ahaan ka mid ah soo fuliyaan, kuwa weli ku dhex jira ay jecel yihiin qof kasta oo ku jira. Maalinta Rose la xusaa oo la badan oo ka mid ah qiiro iyo xamaasad mid ka mid ah caruurta in ay isku dayaan in ay u tilmaamay jacaylka ay si fudud adiga oo siinaya kordhay. Sidaas diyaariyo isticmaalaya kordha iyo waxa ay hadiyad jacayl ah.
Iyadoo maanta waxa suuragal ah in la siiyo Ubax cas casaan huruud ah in ay dadka kala duwan ku xidhan dareenkaaga u gaar ah iyaga. Ubax shaki la'aan waa waxyaabaha buuxda ugu jecel yahay ku jira Ubax gudahood waa mid ka kaliya ee ugu cadcad, kuwaas oo.
Happy soo jeedinayaan Day 2018:
ku faraxsan yahay maalin soo jeedin 2018
Oo maalintii jeedinayaan waxaad u Tagaysaan doonaa burburin, ugana warrami waxa aad aaminsan tahay iyaga, waayo, si toos ah. Waxaad tilmaamaya in qofka aad jeceshahay. Waa maalintii 2-aad ee maalinta v si todobaadkii maalin. Hindise waa in la abuuray gaarka ah adigoo maanka ku meel ku wareegsan oo ay la socdaan hadiyado. Tani waa muhiim haddii aad doonayso inaad soo jeedinta guur
Waxay joogaan jilbaha iyaga u gaar ah iyo sidoo kale kuu diyaarin ah ku hareeraysan qurux badan iyo saaxiib iyo soo jeedinaya kuwa ay jecel. Taasi ma hab sanyihiin si ay u muujiyaan adiga kuu gaar ah u jeclaaday ka mid ah. Xaaladdan oo jacayl ah qof waa run ka dibna aad fahanto waxa keeni kartaa iyaga si dhab u dareemaan farxad iyo gaar. Wax badan oo muhiim ah marka la barbar dhigo nafta aad u jecel, ma aha.
Maalinta Rose waxaa sidhow ula by jeedinayaan Maalinta iyo waxa maalintii 2-aad ee todobaadka Valentine. Iyadoo maanta, waxaad si toos ah dabeecad aad jacayl iyo muujin doonaa dareenka shakhsi dhinaca himor iyada. Sidaas diyaariyo la yaab leh brand-cusub oo ah in ay soo bandhigaan si jacayl ah soo jeedinayaan maanta.
Steak ama qaar ka mid ah naca kale macmacaan Hodmin jaceylka ay la socdaan dabeecada laga cabsado. Iyadoo maanta idinku eryi doonaa farxad u soo bandhigaya shukulaatada uu jecel yahay in aad jacayl iyo ka dhigi himor iyada cajiib ah.
Qof kasta oo kale oo uu leeyahay wax dhadhan kala duwan sida ugu dhakhsaha badan ay timaado doorashada shokolaatada. Maskaxda ku hay in mar kasta oo aad ka bixinayso shukulaatada in qaar ka mid ah kuwa la jecel yahay in ay fiican inaad iyaga siinaysid shukulaatada in ay jecel yihiin. by sida, haddii by fursad oo aad ma dhihi karo dareenkaaga si aad si buuxda maalin soo jeedin, markii danbe maalin shukulaatada waa maalin fiican si loo gaaro in.
Qof walba jecel yahay shukulaatada, si iyaga u bixiyaan xidhmo jecel of shukulaatada iyo iyaga abuuro faraxsan.
Maalinta Chocolate Happy 2018:
The maalin Chocolate Valentine todobaadkii caan 9-kii February sidoo kale waxa uu ku dhacaan dul Friday of 2018.
maalintii ku faraxsan shukulaatada 2018
Waxaad la qaybiyo laga yaabaa in la siiyo farxad shukulaatada gelin ah kuwa u gaar ah oo u dhow oo jeclaaday. Waxa intaa dheer in qaar ka mid ah kuwa la jecel yahay gabar ama ayeeyo xaaskaaga ama saaxiib waxaa macquul ah in ay wada bixiyaan wadnaha qaabeeya ee shokolaatada coronary gaar ah leh hadiyado wax lagu barnaamijka.
Maalinta Happy Teddy 2018:
About Teddy maalin alifay ee hadiyad haweenka ay cute teddy a. Gabdhaha jeclahay kuwan qalabka alaabta lagu ciyaaro run ahaantii ilaa hadda ka fiican. S O socda macaan yar oo shukulaato ah, markaas hadiyad u teddy ah ka dhigi doonaa in aad gabar xitaa badan oo dheeraad ah ku faraxsan.
maalin Teddy waa caan ah oo ku saabsan 10-ka February lagu daray waxaa la hoos on Saturday in 2018.
Amaba noqon doonaa hadiyad ugu jeclaysto in la siiyo qof la jecel yahay. Waxaa mararka qaarkood jecelyahay marka aan ka maqnaan qof. Waxay waxaa mararka qaarkood kor ku dhuftay on haddii aan cadhootay iyo sidoo kale aan qaylin karo qalbiyadeenna ku saabsan.
maalintii ku faraxsan teddy 2018
Maalinta Teddy dhibciyo on 10-kii February, waayo, taasu maalinta jacaylka shimbiraha adduunka oo dhan soo bandhigaan jacaylka oo dhan Amaba la jeclaysto oo cute. Waxaan dhamaanteen ka warqabnaa in gabdhaha waa arrin u eexan orso oo teddy iyo Amaba waa mid ka mid ah hadiyad badan eyadda in la siiyo qof la jecel yahay. Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u helaan maalintii la yaab leh in ay tiriyaan on Amaba ka Valentine ah.
Maalinta Happy yabooha 2018:
maalin yabooh ku faraxsan 2018
Waxay abuuraa ballamihii ay sabab u tahay xiriirka iyo isku day taagan adag ballamahooda aan loo eegayn wax walba oo ku saabsan iman. Intanu waa qaybta ugu wanaagsan oo ugu khaas ah oo ay xiriirka. Taasi waa sida ugu dhaqsaha badan mar kuwa jecel yahay bilaabi felisin filaya iyo aad u bilowdo ku tiirsan felisin dul. Waxay iyaga ugu ballanqaadaan felisin si ay u bartaan dhameystiran uga dhigayeen. Waxay iyaga ugu ballanqaadaan inay eegin sida joogo by gacanta kasta oo kale oo aad u xun in xaaladdu ay tahay mid.
ballamo Samaynta waa effortless laakiin hayo ballamadan waa adag. Xiriirka An dhabta ah waa haddii loo joogteeyo ballamihii ay ka hor dhamaad ah, iyo sidoo kale isku day kasta oo ay suurtagal tahay inay ku dhameystaan ​​ay yabooh. xiriir A barwaaqo ah waa xaqiiqada ah in dadka waawayn marnaba quusan in ay associate oo isku dayda in ay ka soo saxo wax, habase, sidoo kale isku day waa in ay si dhab ah u noqon labada dhinac.
Maalinta yabooha dhaco dul February 11. Yabooha u qabata qayb muhiim ah in xiriir iyo fulinta la ballankii waa waxa ugu muhiimsan 2aad si aad u hesho xiriir Cinabka. Samaynta ballamo weyn ma qeexi doona xiriirka adiga kuu gaar ah, laakiin kuwaas oo gudanaysa iyadoo furitaankii xooggan oo sidoo kale kalsooni ku deggan variable waa muhiim. Sayidka ma aha kuwo Rumayn badan soco ilaa hore iyo yabooh si jacayl ah in, idin tusayaa wixii daahirinta iyo joogteynta iyaga ku faraxsan oo dhan mudada ay nolosha.
Balanqaadyo ay sahlan tahay in la abuuro laakiin adag tahay in la sii. Waa wax badan ka wanaagsan in ballanka si kastaba ha ahaatee waxaan ku khasbannahay in ay noqon waxtar leh ee ku muujiyey our jacayl iyo kalgacal in qof aad jeceshahay aagga of ballamo ku muteystay. laakiin, waxaa jira maalin kasta aqoonsaday maalinta ballankii maalmood toddobaadkii ee Valentine. Sayidka abuuro ballamo maalintii yaboohaasi si kastaba ha ahaatee aadan buuxin leh kuwa ka hor si aad Hardy xiriir.
Maalinta Happy Hab 2018:
maalin hab ku faraxsan
Hab maalin hadal ku saabsan isticmaalka farxadda by siinta kuwa aad saaxiib iyo jeclaaday . Aan si fudud u jecel yahay kuwa sida ay tahay oo kaliya hab in iftiimin karin ilaa maalinta qof ee.
Maalin kasta dhaco dul 12-kii February badan oo dhallinyaro ah, kuwaas oo maanta ku farxi doonaa, xaalka. Tani waxay ka mid deeqaha maalin iyo fursad qaali ah si ay sheegayaan in jacayl marna dhamaaneynin ee jacaylka ay dhunkasho dhagan iyo diiran.
Ku dhawaad ​​maalin Hab-hawlgalayaasha ka felisin u guursho,. Waxay isu gacanta kasta oo kale oo nasashada. The dugaal iyo raaxo ay aaminsan yihiin in la joogo gaar ah tani waa qiimo. Waxay duub felisin si dhagan sababtoo ah haddii ay waqti aad u muhiim ah in ay nolosha iyo si ay dhab ahaantii ma waxa felisin in ay ka tanaasulaan.
Siinta mid habase yeeshee kale siinayaa raaxada, u kordhiyaa jacaylka. Its ma aha oo kaliya ku saabsan shan iyo labaatan maalin. Marka aad jeceshahay ku faraxsanayn, si fudud u qabato oo ay siiyaan dhunkasho dhagan. Waxaa la socday, sida xaqiiqada ah waxaa iyaga hor kici si ay u dareemaan fog wanaagsan. Hab siisaa dareen ah in aad keligaa ma tihid. Waxaa baraya in aan halkaas kula ahay. Waxaa muujinayaa walaaca. Waxay muujinaysaa in, habase yeeshee adag ay xaaladdu waa, 'Aad mar kasta waxa aan dib ugu heli lahayn'.
maalin Kiss Happy 2018:
maalin dhunkasho ku faraxsan 2018
Dhunkada dhibciyo on 13-kii February Day, tani waa mid ka mid ah mid ka mid ah maalinta dibadda ugu yaab of this Valentines toddobaadka. Iyada oo maanta ku caashaqa oo aad naftaada u hesho fursad dahabi ah si ay u wadaagaan jacaylka by siinta dhunkasho dareen in ay Valentine. Gaar ahaan dhunkada on qarkeedii runtii waa calaamad ka mid ah daryeelka iyo isagoo ka masuul ah. Isku day inaad soo baxay hadal jilicsan this jacaylka bedeli maanta galay mid ka mid ah saaxiib iyo xusuus.
Oo maalintii dhunkasho-hawlgalayaasha ka felisin dhunkado. Maanta ayaa laga yaabaa in ay ahayd maalin aad u caan ah oo ay view. Xusuusta maalintan in gaar ah. Dhunkashada waa tilmaam aad la jeclaysto in la yidhaahdo love.Kissing kuwa aad jeceshahay siinaysaa dareen wanaajiyay horgaygee mana weyn. Tani waa mid gaar ah sidaas maanta xitaa more gaar ah si ay kuwa jecel yahay heli.
Kiss waa nooca ugu yaab leh si ay u muujiyaan jacaylka. Waa suurto gal ah in aad tidhaahdaan jacaylka in tobanaan kun oo siyaabo habase, nooca ugu fiican ee ra'yi dhiibashada waa dhunkasho. Waxaad ka heli doontaa noocyada gaarka ah ee ay ka mid yihiin dhunkasho sida dhunkasho Christmas, dibinta in dibinta dhunkasho, dhunkado on qarkeedii.
Maalinta Happy Valentines 2018:
Last laakiin ma Day yar Valentine ee lagu dhibciyo dul 14 February, tani waa mid ka mid ah mid ka mid ah maalinta buuxda ugu gaar ah oo dhowr ah oo dadka ku nool dunida ee, dadka fasalada da'da ugu dabaal maalin qurux badan tan loo yaqaan Maalinta Jacaylka.
kaliya waxaa jira jecel isagoo sheegay in "Ha sugin ilaa ay goori goor tahay in qof kale la qaybsanayso sida kaliya inta aad dhab ahaantii u jeclahay, inta aad dhab ahaantii daryeel kuwaas. Tan iyo markii ay tageen Si kastaba ha ahaatee qaylo aad u guuxi iyo qaylo, iyagu ma ay aad mar dambe ka maqli doonaa. "Maanta heysta badan oo muhiimadda badan taako nolosha yar. Sidaas sooco, maanta oo dhan kula mid la jecel yahay, u tagto mealsand jecel filim soco masaafo sii dheeraaday iyo in la abuuro maanta mid la xusuusto.
ma waxaa jira wax shisheeye dareen marka loo eego jacaylka. Marna ha ku lug leh ku. Jacaylka ka naf daahir ah. Raadi go'an, helaan kalsoonida, sheeg jacaylka.
Waxaad ka heli kartaa heshiis u weyn oo rag iyo dumar kuwaas oo aan bilaabay jacaylka neceb sida qaar ka mid ah dadka oo aan sax ahayn iyo gabdhaha ay dhan rumoobay. Waa in aad ku dhici jacayl qof sidan oo kale, ka dibna siiso waqti, helaan kalsoonidooda, ka dibna u oggolaan in ay helaan kalsoonida jacayl, abuuro inay fahmaan in qof kasta ma sax ah isla saxda ah. la joogo in aad xaqiiqsato guul ka helo kalsoonidooda youpersonally, Markaas qaar aad marna Buriya core. Iyaga ha ka go'aan walba, isku dayaan in ay iyaga fahmaan sida keliya guul siinayaa jacaylka.
'Maalinta Jacaylka'Waa maalin dhab ahaantii gaarka ah ee ragga iyo dumarka ee jacaylka. Haddii mid ka mid ah waxyaalihii aad u soo jeediyay in ay qaadataa aad qawl ka dibna waxaa soo baxday maalin aad u gaar ah si aad u. Waxaas dabadeed marka aad ku sugan tahay xiriir haddii wax qaldamaan markaas maanta maskaxda ku hayso mar lahaa in aad sidaas ku faraxsan. la xiriirta kasta oo uu leeyahay taxne kore iyo hoose, dagaal, ilmo, iyo farxad, quusan, farax, Niyadjabka. Laakiin weli ma joojin isku dayaya. Si joogta ah ha in ay sameeyaan dadaal inaad dibadda waxaa wax baadhay. Waxaa had iyo jeer kuu ogolaan doonaa in aad xiriir si loo sugo xoog.
Haddii dhaadin, haddii aad ka hortagaan diidmada ee qawl ah, ka dibna aan isku caroon. Qof walba waxa uu leeyahay ay dabacsanaan aad u gaarka ah ee doorashada. Waxaad u helay in ay sugaan in kuwan u ogolaan in ay aqbalaan oo keliya soo jeedin, habase yeeshee iyagu ma ay u muuqdaan in ay markaa qirayaa si fudud ha tago.
In article ku xusan, waxaan idinku arsuqay info dhamaystiran oo ku saabsan todobaadkii Valentine 2018 iyadoo muhiimadda dhamaystiran ee maalin kasta oo todobaadka Valentine. Waxaan sidoo kale la siiyaa link wanaagsan ee ku haboon images maalin kasta, duni, fariimaha iyo salaanta, sms. Haddii aad ku raaxaysan this article fadlan la wadaagto saaxiibadaa oo wuxuu ku raaxaysan Maalinta Jacaylka 2018 jacayl iyo farxad.
Dhamaystiri this post qurux badan la hadal la yaab leh in "marna sugi waqti ku haboon in la wargeliyo qof oo aad iyaga u jeclaan sababta waqtiga loogu talogalay qof kasta, waxay hadda samayn. "Sidaas ogolaan Maanta Valentine ayaa ku siin awood u leh inay wada hadlaan dareenkooda qoto dheer aad aad heysato for this 1 qofka la kii rumeeyey aadan ku noolaan karaa iyada oo aan. Doonaya qof walba maalinta aad Happy Valentine ee 2018 ka hor, waxaana uu rajeynayaa in qof walba uu ogaado in ay yihiin ee naf run! Waayo, updates more, joogo xiran!